Spotify dia nanambara ny fividianana MightyTV | Vaovao momba ny gadget
Spotify dia nanambara ny fividianana MightyTV
Resabe efa elaela izay Spotify Mety ho liana kokoa amin'ny fahalianana amin'ny fanaovana ny làlana mankany amin'ny tontolon'ny atiny audiovisual io. Ankehitriny dia toa toa manomboka miorim-paka ity hevitra ity noho ilay fanambarana nataon'ny sehatra fanta-daza momba ny fahazoana MightTV, iray amin'ireo serivisy fanoloran-kevitra momba ny atiny mifandray amin'ny fahita lavitra indrindra amin'izao fotoana izao.
Amin'izao fotoana izao dia ny hetsika nataon'ny tompona sehatra, amin'ny lafiny iray, ny marina dia mety tsy io ny safidy tsara indrindra hatrizay, na dia eo aza ny zava-misy fa manana fotodrafitrasa ilaina izy ireo mba hampiodina azy, ambonin'izany rehetra izany, mpampiasa marobe marobe izay hanombohana miteraka tanjaka, ny marina dia tsy maintsy miatrika fanamendrehana izy ireo amin'ny lafiny karazana atiny ao amin'ny fampiharana izay hitondra asa be ho an'ireo mpamorona azy ireo.
MightyTV sy ny teknolojia rehetra lasa fananan'ny Spotify.
Amin'ity fotoana ity dia mila mampatsiahy anao aho fa tsy ela akory izay dia nanao ny vaovao ihany koa Spotify noho ny fividianana Sonalytic, orinasa iray hafa natokana hanomezana votoaty na dia amin'ity tranga manokana ity aza, mifandraika amin'ny indostrian'ny mozika. Araka ny famoahana maro izay namaritra azy, Sonalytic dia karazana Shazam, fampiharana iray izay angamba malaza kokoa any Espana, saingy manana fahefana lehibe kokoa ary natao ho an'ny mpihaino azy hianatra momba karazana mozika, hira ary na mpanakanto aza.
Amin'izao fotoana izao dia afaka miandry fotsiny isika, toy ny lojika etsy ankilany, avy Spotify dia tsy te hampahafantatra izay drafitra ananany ho an'ny MightyTV na mivantana ho an'ny teknolojia fanoloran-kevitra momba ny atiny. Amin'izao fotoana izao dia heverinay fa ny zava-drehetra dia hitohy hanatsarana bebe kokoa ny traikefan'ny mpampiasa na dia izany aza, ny marina dia, araka ny filazan'izy ireo, 'rehefa maneno ny ony, mitondra rano' ary mety tsy dia lavitra loatra ny fahitana ny fitsangantsanganana voalohany nataon'i Spotify isika eo amin'ny tontolon'ny horonan-tsary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Spotify dia nanambara ny fividianana MightyTV
Microsoft dia manala an'i Docs.com taorian'ny hadisoana lehibe iray